Basket-ball - Africa League :: Hifandona voalohany amin’i Maraoka ny GNBC • AoRaha
Isan’ireo ekipa roa ambin’ny folo manohy ny fifaninanana « Basket Africa League » ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena na ny GNBC. Ao amin’ny vondrona “Sahara” no misy azy. Hanomboka, amin’ny 13 marsa hatramin’ny 15 marsa 2020, ny dingana voalohany hatao any Dakara (Sénégal). Fantatra fa hifandona voalohany amin’ny AS Salé (Maraoka) ny GNBC, amin’ny 14 marsa 2020. Hihaona aminy manaraka ny AS Police (Mali), amin’ny 15 marsa 2020.
“Ekipa manana ny maha izy azy avokoa ireo hifanandrina amintsika ireo. Tsy dia mifanalavitra ny haavo teknika. Manatombo kosa ry zareo eo amin’ny lafiny ara-batana”, hoy Raharidera Lova, mpanazatra ny GNBC.
Hitohy any Luanda (Angola) ny dingana faharoa, amin’ny 10 hatramin’ny 12 avrily 2020. Hifarana amin’ny 8 sy 10 mey 2020 any Salé (Maraoka) ny dingana farany.
Any amin’ny vondrona “Nil” kosa ny Rivers Hoopers (Nizeria), FAP (Kamerona), Ferroviaro (Mozambika), Patriots (Roanda), Zamalek (Ejipta) ary US Monastir (Tonizia). Hifaninana any Monastir, Caire ary Lagos ireo klioba enina ireo.
Ho tafakatra amin’ny dingana manaraka na ny « play-offs” ireo ekipa efatra voalohany, manomboka amin’ny 28 mey 2020 any Kigali (Roanda).
Baolina kitra – Fenitra kianja :: Hotsarain’ny manam-pahaizan’ny Fifa ny fotodrafitrasan’i Barikadimy